Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda oo galabta xafiiskiisa kula kulmay xubno ka socday Golaha Midowga Musharaxiinta, kuwaas oo warbixin ka siday golaha. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda oo galabta xafiiskiisa kula kulmay xubno ka socday...
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda oo galabta xafiiskiisa kula kulmay xubno ka socday Golaha Midowga Musharaxiinta, kuwaas oo warbixin ka siday golaha.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa galabta xafiiskiisa kula kulmay xubno ka socday Golaha Midowga Musharaxiinta, kuwaas oo warbixin ka siday golaha.
Previous articleWasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya oo ku hanjabtay inay joojinayso Diyaaradaha Shaqaalaha UN-ka ee Muqdisho aada.
Next articleXukunka Raisal wasaaraha Israel Netanyahu oo qarka u saaran in ay bur burto
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa guddoomiye cusub u magacaabay Gobolka Baay ee Maamulkaas. Wareegto uu soo saaray Madaxweyne Cabdicaiis...